Lacag Baad ah Bixi Hadii Kale Waa kaa Reebayaa Diyaaradda - Dhibka Lagu hayo Shacabka Soomaaliyeed(Dhacdo dhacday) - iftineducation.com
iftineducation.com – Dhibaadata dadka soomlida haysataa maaha mid ku khaas ah dad gaar ah oo soomaliyeed, dhibaatada soomalida haysataa waa mid aad u balaaran dhinac walba marka laga eego, ha noqoto dhanka socdaalka,bada ama barigaba ama mucaamalada dadka soomaliyeed loola tacaamulo guud ahaanba, cid kastaaba waxay soomaalida u aragtaa dad xun oo had iyo jeer wax bug ah wata, hadaad wax sax ah wadato iyo hadii kale waa isku mid, ruuxa passport Somali wata ee la arko waxaa loogu soo talagalayaa in lacag baad ah laga qaado hadii kale lagu yiraa waxaad wadataa waa bug waan ku celinaynaa, hadii kale waa inaad bixisaa waxay doonayaan.
Waxaan maqli jirnay in police ka Kenya uu soomalida degen Kenya uu lacago ka qaato , taasina ay noqotay wado furantahay oo umada soomalida lagu xalaalaysto xoolahooga, gaar ahaan dadka danyarta ah eena awoodin inay dhan uga baxaan kenya.
Dhawaan ayaan u socdaalay dalka aanu jaarka nahay ee Djibuuti, airportka markaan ka dagay een immigration ka is dultaagay si la iigu shaanbadeeyo passporka, waxaan u dhiibay passport kaygii ,waxaanan raaciyaya fees dii visa entry ga ee caadiga ahayd 10000 toban kun oo FDJ ah waxayna u dhigantaa 60$ dollar. Wuxuu igu yiri barjahaygiina iigu soo dar, waa hadalka aan aad ula yaabay, nin weyn oo uniform dowladeed gashan oo barjahaygiina iigu soo dar ile, oona waxba qarsanayn, waxaan ku iri, waan ka xumahay yar yar mahayo( change mahayo) intaasi marka ay na dhexmartay labadayadii, passporkiina uu gacanta ku hayo, isagoona shaanbadeyn sida muuqatayna uuna doonaynin inuu isiiyo passporka anoona wax siinin ayuu noo yimiday nin officer ah oo airport ka u yimid si u ii qaado, marka uu arkay ninkan officerka ayu ku yidhi nin ku xaaji ma qaraabadaa, waakan passporkiisiina e hoo qaata waan shaan badeeyee, sidaas ayaan magaalada ku galay.
Soo bixitaankii markii aan soo baxayayna waxaa dhacay sidaas iyo si kadaran, waxaa la iigu mar mar sii yooday ticked back ah waa inaad haysataa, waxaan ku iri: ticked ka aan ku soo galay Djibouti Go nand Back weeye halki aan ka imidaan ku socdaa een marka hore ka soo goostay tigidhka waana kan sharcigii dalka aan ku socdaa, djibuuti dalkaygii maaha iniguma soo noqonaayee back aad sheegi waa maxay, waxaan ku iri ticked 3 ways ah aduunka halkuu ka jiraa , anagu 2 ways uun baan naqaana e. mise sharci baad igu haystaa? Staff kii diyaaradu iyagu meeshan bay yaabanyihiin waxa la igu haysto inayna jirine si badheedh cad ah uun la ii damacsanyahay in lacag la iiga qaado been ah.
Intaasi marka ay na dhexmartay ayuu midkale amray in shandadayda diyaarada laga soo reebo. Shandadii ayaa la ii keenay diyaaradiina wey kacday, sidaas ayaa flght kii la iiga cancel gareeyay. Waxaana la ii sheegay inaan la imaado new ticked back ah. Rafaad iyo orad dheer ka tib ayaan meeshi 3 maalmood ka dib ku soo noqday aiporkii, sidaas ayan kaga soo baxay Djibouti.
Markaa dhibta dadka soomalida haysataa maaha mid ku gaar ah meel qura ama dal gaar ah e waa mid caama waana dhib haysta dhamaan dadka passport soomaliga sita nuucuu dooniba ha ahaado pssporku e. dad badan oo soomali ah waxay qabaan inay dalalka aanu jaarka nahay ay yihiin umado aan walaalo nahay, waana hadal siyaasadaysan e maaha hadal reality ah dadka soomaliyed dalalka jaarka dan uun baa baday e maaha dad aanu walaalo nahay, soomaliduna dalalkaas qasab uunbay ku joogaan e cid jecel oo meesha ku haysaa majirto, dalalkan aanu jaarka nahay waxaa dhamaantood inaga dhexeeya hirdan taariikhi ah iyo xuduudo maguuraan ah oo qasab ay ku haystaan sidaa darteed waligoodba ma walaaloobayaan dalalkaasi sida aan qabo, waa laga yaabaa in muda ah inay nabad ay kuwada noolaadaan.
Dad ka reer Djibuutina soomali nacaybku wax hada ku abuur may maaha, 150 sanood oo uu gumaysiga Frech ku haystay ayuu ka dhaadhicinaayay inay dadka soomalidu yihiin cadow gooda qura, halka ay Ethiopian kana saaxiibo ka yihiin. Sidaa darted waala xasuusanyahay dowrkii ay ku lahayd Djibuuti taageeradii jabhadihii burburiyay soomalia sida SNM Siyaasadaas ayaa wali meesha taala, inkastoo waayadan danbe ay isu dayeen in nacaybkaa la yareeyo soomalidana la dareen siiyo inayna cadownimo loo hayan ayaa shir loogu qabtay Djibuuti, arintaasina waa mid siyaasadeed oo madaxada Djibuuti ayaa doonaysay inay ku soo caan baxdo qadiyada somaliya, iyo dano gaar ah oo siyaasadeeba.
Ugu danbayan soomaliduna sidan ka bixi mayso ilaa ay iyadu dib isugu noqoto oo ay qaladkeeda dareento oo dhulkooda dhistaan, cadowgooduna ixtiraami mayo inta ay hoos fadhiyaan, ama maatidoodu daadsantahay gidaarada dalalka aanu jaarka nahay.
Aqrisa Magacyada Dadkii dhintay iyo kuwa wali lagu la layahay Xeebaha Liibiya iyo Talyaaniga